Bangaki abasebenzisi emhlabeni siqu computer, imicabango yabantu amaningi ayesezobhekana kukhethwa izipikha engcono senhlobo ehlongozwayo eziphethe imakethe yomhlaba wonke. Iqiniso lokuthi umkhiqizo othize enjalo libhekwa hhayi kuphela izici lobuchwepheshe kanye nokusebenza, kodwa futhi izinga umsindo futhi intengo. Eqinisweni, emakethe ngaphansi kwegama "umsindo for PC," uzobona wonke imikhiqizo ehlukene ukuthi bayakwazi ukuthola bona umthengi ngabanye.
Umnqopho we kulesi sihloko - Izikhulumi yekhompyutha yakho. Usezingeni the best (ngekhwalithi, intengo nokusebenza) imikhiqizo, abanikazi nenzuzo yangempela nochwepheshe iseluleko ukusiza umthengi ezingaba ukukhetha umsindo ehloniphekile senhlobo omkhulu imikhiqizo emakethe.
Qala kangcono Isici sefomu, okuyinto hhayi kuphela inquma uya khona uhlelo umsindo, kodwa futhi ukwazi kancane ichaze intengo ingxenye, okuyinto kufanele siqondiswe umsebenzisi. Ukuzwakala komculo libhekwa ngenani amakholomu isethi:
Stereo. Konke ilula - Izikhulumi ezimbili nje, ezithinta zwi elilodwa noma ngaphezulu esakhelwe, uyakwazi baveze yonke ezwakalayo imvamisa ububanzi. Lokhu ikhithi kufanelekile abasebenzisi undemanding kakhulu ubani nje kudingeka uzwe umsindo uma usebenzisa abezindaba.
Uhlelo 2.1. Ezimbili zestiriyo subwoofer sici, okuyinto unomthwalo kuphela ongaphakeme imvamisa uhla (20-300 Hz). Okunjalo uhlelo, ochwepheshe batusa ukuthi bonke abathandi bomculo abazama ukuthola indlela ukukhetha izipikha yekhompyutha yakho. Ukuze umculo high quality, uhlelo olunjalo lwaluyoba lesikahle.
Ikhaya Theatre. Lokhu kuhlanganisa yonke umsindo, eyabika esikhathini oyiyo izipikha lemine ephelele subwoofer (5.1, 7.1, 9.1 nokunye).
Yiqiniso, umthengi ezingase zibe ngeke abe nesithakazelo umsindo, okwethulwa isigaba isabelomali. Phela, iningi amakhasimende, ngokuvumelana kuzibuyekezo zabo, konke ungafuni ukuchitha imali kwi izikhulumi yekhompyutha yakho. Usezingeni the best (izinga umsindo) imikhiqizo kule ingxenye, iqala ngentengo "engama-ruble 500 1,000" isigaba.
Uma sikhuluma imikhiqizo eshibhe, umthengi kungcono ukubheka engabizi udluliseleke abakhiqizi ezifuywayo ngaphansi wasemuva brand. Ukuze multimedia undemanding abasebenzisi ngokuqinisekile like SPK-225 ikholomu. Iqiniso lokuthi leli imodeli ifakwe ikhadi lalo umsindo futhi bangasebenza iyiphi ikhompyutha ifakwe-USB port.
Kodwa ephansi ekupheleni flagships kungenziwa ngokuphepha kuchasiselwe udluliseleke esibi nakakhulu, okungase ukwanelisa futhi abaningi abathandi umculo. Okokuqala sikhuluma wasemuva Aurora - lezi amakholomu ikhethwa amakhasimende amaningi. Futhi ingxenye engabizi khombisa eliphezulu kwemikhiqizo elandelayo: F & D R-215, Edifier R18, Logitech S-120 futhi 247 Sven.
Lapho umthengi kungaphezu ingxenye yesabelomali nasesikhathini lesembili izinga yakhe umkhiqizo, ngaphambi ivula izici ezahlukene ngokuphelele. Izikhulumi kakhulu kukhompyutha lapho isilinganiso kuyinto ebavumela ukuba ukuthenga ekahle yimuphi umsebenzisi, ise-range amanani ngempela "engama-ruble 1000," futhi, njengoba umkhuba imibukiso, umkhawulo wenani alikho. Lapha konke kuncike ongakhetha yomthengi.
Nokho, uma, ngaphezu izinga ikhasimende isithakazelo lifanele intengo, ochwepheshe batusa sihlole brand ezilandelayo: Microlab SOLO-7C, wasemuva Mercury, Gemix Prime2, Sven SPS-707, Edifier R2800 kanye Logitech Z200. Isici esiyinhloko mikhiqizo kuyinto izindlu ukhuni design hhayi kuphela. Umenzi uye walungiselela umsindo walo futhi izinga ezinhle izikhulumi bayakwazi ukubonisa umsindo eliphezulu kwabanye.
ingxenye ezishisa emakethe
Ngaphambi ukhetha kwekholomu ikhompyutha subwoofer 2.1, umsebenzisi kufanele azinqumele yena ukuthi iyiphi efuna ngempela uthole umphumela. Iqiniso ukuthi isikhulumi sasisebenzisa wayeqondeni ngumkhiqizi njengoba ithuluzi abathandi umculo abazi umculo bayakwazi ukuhlukanisa ngu indlebe ukudlala izinsimbi zomculo. Akukho lapho umsindo ezungezile yokukhuluma akuyona. Ngakho, abalandeli ukubukela amabhayisikobho ashukumisayo nemidlalo ezisebenzisa miphumela, ohlelweni ngeke isebenze kahle 2.1.
Ngokuya izincomo, kukhona elula ngakho njengoba kubonakala cha. Kungcono ukunikeza uhlelo oluthandayo, ifakwe ukhuni subwoofer enamandla. ezikhonjwe kuphela a subwoofer, ungakhetha satellite. Futhi uma ushintshela ngqo imikhiqizo, ochwepheshe batusa pay ukunaka esikhulumini: Sven MS-2000, Edifier S330D, Gemix SB-75, Microlab H-200 futhi wasemuva Avante X45 Pro. Yebo, le mikhiqizo abe ilethe inkinga enkulu, kodwa lezi onobuhle anesikhundla okuholela isilinganiso izinhlelo 2.1.
Nokho, akuzona zonke umthengi uzimisele ukukhokhela i udluliseleke ezibizayo round isamba. Abasebenzisi abaningi uncamela phansi phakathi, njengoba ngokuyinhloko igxila amanani ezingabizi kanye nokubuyekeza of the abanikazi. Le ndlela izinto uqondakala kahle, ngakho-ke, umfundi kufanele zifunde ukuthi ukhethe kwekholomu ikhompyutha subwoofer kusukela eziphansi ingxenye.
Into esemqoka - ukugxila amandla wangempela subwoofer. umkhiqizi Decent ayivumeli uqobo ukufakwa esiku subwoofer tweeter. Bafuna sibalo 5 siqala kusuka W (isikhulumi kufanele kuhle ukunikeza RMS amandla okungenani 10 Watts). Iqiniso lokuthi leli cala kumele kube izinkuni, hhayi Kuhle kokusho - kuba lokuma nganoma yisiphi subwoofer ezinhle. Kodwa ukuze kumasathalayithi akudingeki izidingo ezikhethekile - bamane babe ukusekela ibanga lokuvama 300 Hz kuya ku-20 kHz.
Futhi uma eyolanda izipikha ohloniphekile kukhompyutha yakho, isilinganiso kangcono izinga izikhulumi ngokuqinisekile uyoqondisa umsebenzisi 5.1. Kuyacaca ukuthi ukuzizwa ngendlela isengezo ehholo, umthengi ngamunye ufuna, ukuthi nje kungaqali njalo sazi kahle ukuthi imvelo ungakhi kukholamu, futhi idivayisi sokudlala (computer, umamukeli, rekhoda).
Esikhathini abezindaba, eziningi engemihle evela kubanikazi bako wangempela izinhlelo 5.1 abakhononda nokungasebenzi amasethi ngokuya komculo noma ukubuka ashukumisayo lapho enza izinto-movie. Inkinga iwukuthi empeleni hhayi amakholomu, umsebenzisi kufanele ukhathazeke khona ezifanele ikhadi umsindo, kanye ukuxazulula inkinga ohlanganisa umsindo kwesokudla.
indlela EsiZulwini asinayo oluthandwa
Akukho okusha kukhethwa izipikha ehloniphekile phakathi 5.1 izinhlelo umsebenzisi ngokwakhe awayiboni. Le nqubo oluthandwa lapha iyafana ucinge iqoqo 2.1. Kuphela eliphezulu subwoofer namandla kungasiza ukukhetha izipikha esifanele kukhompyutha yakho. Isilinganiselwa udluliseleke ekilasini isabelomali akunakwenzeka ukuba baziswa amakhasimende iyaziswa, ngoba kule ingxenye, akukho imikhiqizo ezishibhile.
Amanani lezi amadivayisi aqala nge uphawu ruble 10 000. Ngaphezu kwalokho, uhla imikhiqizo kuleli kilasi kungaba ngcono. Futhi uma uya ngqo izincomo ochwepheshe, ukukhetha nhlobo yayizovela onobuhle ezimbalwa: Umdlali wasemuva Orchestra-M80 kanye Sven HT-200. Eminye imikhiqizo ibe nenani eliphezulu, noma eyenziwe ngepulasitiki, esithinta kakhulu izinga ukudlala.
Kukhona lapho ukuze ujike
Kodwa ingxenye ezibizayo 5.1 izinhlelo zonke ngempela Kunalokho - abakhiqizi abaningi abadumile ukunikela abathengi eziningi kumadivayisi ezithakazelisayo ukuthi zisekujuleni hhayi kuphela njengoba isikhulumi ukuze ikhompyutha. Usezingeni amadivaysi best izinga amasistimu ethu phansi, okungase exhunywe kwi-izikhungo ekuchumana, i-TV, umamukeli nezinye electronics.
Futhi uma ukhuluma ngokuqondile mayelana tinkhulumo, ochwepheshe batusa ukuba banake izipikha Microlab H-600, Edifier S760D, Edifier DA5100 kanye Genius SW-HF5.1 6000. Letindlela ezibhekwa the best in the emakethe yasekhaya. Yebo, nakanjani isixhumanisi ababuthakathaka lapha izobiza, ngoba akuzona zonke umthengi angakwazi ukukhokha imali ruble 20,000 ekhaya umsindo. Kodwa kule simo umkhiqizo best a priori akukwazi amadivayisi ezishibhile.
Emzamweni ukuthola izipikha best for isilinganiso computer, abathengi abaningi ezingaba ziye zaqaphela ukuthi luyaphumelela emakethe kukhona omunye umkhiqizo omningi ongaziwa ngokwanele. Lona okuthiwa 1.0 uhlelo. Eqinisweni, lena ikholomu ezivamile, ehlanganisa elilodwa noma amabili izikhulumi. Okungenani kubonakala kuyisimanga futhi intengo umsindo ezifana - intengo iqala kusukela ama-ruble ayizigidi 2-3 ukufanekisa ngezimpawu kanye namanye ayinakho "uphahla".
A mkhuba omusha emhlabeni umculo ucele inkampani JBL. Kwaba esona waqale wangena emakethe nge computer izipikha 1.0 elimisiwe iphakheji okukhethekile. Abantu babone mikhiqizo kalula, lokhu kuchaza ukuthandwa isikhulumi emakethe enjalo, kanye ibanga elikhulu.
Ake umthengi ezingase zivele futhi kubonakala sengathi kulula kakhulu ukukhetha izipikha emakethe computer, simo the best quality izinhlelo ukushintsha umbono wakhe. Ngempela, phakathi ibanga elikhulu imikhiqizo akukona ngempela njengabawufanelekele izimpahla, ekwazi nezimfuno audiophiles. Ochwepheshe batusa ukuba basheshe bakwazi ukuzikhethela abayithandayo ningayenzi iziphetho ngokuphamazela. Singabantu niqaphelisise ukukhetha izipikha ngokwakho, ngoba ingenye ukuthenga ambalwa enzelwa ukuphila.
Ama-headphone okunemakrofoni ngoba Laptop: Ukukhetha, incazelo, izici
Isokhethi LGA 1155 umbadlana 1155: izici kanye nokubuyekeza
Sawfly Pine: izindlela emzabalazweni
Sifundisa izingane ukudweba ezigabeni T-ipensela 34 kanjani
Indlela ukucisha amazambane kanye iklabishi: zokupheka